MAYDAY kubva kuDominica: Prime Minister Roosevelt Skerrit: RUBATSIRO!
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Dominica Kuputsa Nhau » MAYDAY kubva kuDominica: Prime Minister Roosevelt Skerrit: RUBATSIRO!
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Dominica Kuputsa Nhau • Hospitality Industry • chengetedzo • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Trending Now
Prime Minister Roosevelt Sherrit aigara kuburikidza neHurricane yairwisa nyika yake: “Hatizive zviri kuitika kunze. Hatingatarisiri kutarisa kunze. Zvese zvatiri kunzwa iko kurira kwekusimudzira kubhururuka. Ruzha rwehasha dzemhepo. Sezvatinonamatira kuguma kwayo!.
Dominica iri munyatwa mushure mekunge Hurricane Maria yatsvaira pamusoro penyika yechitsuwa chidiki sechikamu Hurricane 5. Mishumo yekutanga ndeyekupararira kwakapararira.
Prime Minister Roosevelt Skerrit vakati: “Parizvino tarasikirwa nemari yese iyoyo inogona kutenga nekutsiva. Chandinonyanya kutya mangwanani ndechekuti isu tinomuka kune nhau dzekukuvara kwakanyanya mumuviri uye kufa kwevanhu nekuda kwekukwira kwepasi kunokonzerwa nekunaya kwemvura.
Nekudaro, kure mhepo dzavekukudza matenga eanenge munhu wese wandakambotaura naye kana neimwe nzira kusangana naye. Denga remba yangu chairo yekugara yaive pakati pevekutanga kuenda uye izvi sezviri pachena trigyakaratidza kubhururuka kwematenga edenga akabvarurwa muguta nemumaruwa.
Huya mangwana mangwanani tinorova mugwagwa, nekukurumidza kana zvese pachena zvapihwa, mukutsvaga vakakuvara nevaya vakasungwa mumarara.
Ini pachokwadi handina kubatikana nekukuvara kwemuviri panguva ino, nekuti zvinoparadza… zvirokwazvo, kufunga-pfungwa. Ini tarisiro yangu ikozvino iri pakununura vakavharirwa uye kuwana rubatsiro rwekurapa kune vakakuvara.
Tichada rubatsiro, shamwari yangu, tichada rubatsiro rwemarudzi ese.
Kwayedza chaizvo kuti nditaure nezve mamiriro emhepo uye chiteshi chengarava, asi ini ndinofungidzira kuti ese ari maviri achange asingashande kwemazuva mashoma. Ndosaka ndave nechido chekukumbira rutsigiro rwemarudzi ane hushamwari nemasangano ane maherikoputa, nekuti ini pachangu ndine shungu yekusimuka ndotenderera nenyika kuti ndione nekuona zvinodiwa. "
Sekureva kwevakuru vemunharaunda, hapana kukuvara kunotaurwa uye vashanyi vakachengeteka.